Baroordiiq Maxaa Ka Danbeeya? | Puntlandi.ca
Home Maqaalka Aqristaha Baroordiiq Maxaa Ka Danbeeya?
(9) Waa in 30 kii guriba loo sameeyo guri uu joogo nin maamula sodonkaas guri oo ay subax walba raggii shanta guriba ka masuulka ahaa ay u soo gudbiyaan wixii cusbaa ee ku soo kordhay dad cusub 6 daas unug. Waa in uu asaguna u gudbiyaa “report” gaas ninka booliiska ee haysta xaafadaas.
(12) Haddii Allah yiri dunida inay suusho, baaba’do iyo in qof Muslim ah oo waxba galabsan la dilo, waxaa Allah agtiisa ku weyn dilka muslimka. Soo marka Masuuliyiinta Gobolka Benadir wax walba in ay kala weynaato bedbaadinta Nafta Muslimka maahan. Xamar oo dhan ilaahow maa lug loo kala socdo, waa in ay taa ka horeysaa in uu nabad la’aan ku dhinto qof Soomaali Muslim ah.
Haddii aysan sidaa dawlada uga go’neyn in ay amaanka u sugto, maro gaduudan oo madaxa lagu xirtaa, ama in la yiraahdo shacaboow isku soo baxa waxba tari mayso.